Chikumi 2019 Mushandirwi anoshanyira Bhora HED Pilot Project saiti
ne admin pane 20-03-17
Kutevera kuisirwa kwakabudirira kupera muna Chikumi, Mushandirwi akaongorora kufambira mberi kwenzvimbo uye akataura kugutsikana kwake mukutongwa kwekutongwa (pasi pehafu Reservoir Capacity) yedhamhu reHED. Projectwill ichave inopihwa mushure memwaka wemvura mushure mekuedzwa kweHED (pasi peResvovoCapacity izere).
Chikunguru 2019, BIC inoshanyira kubazi rezvekurima uye kudiridza kweMyanmar
Mukutanga kwaChikunguru, General Chen akatungamira boka revamwe mainjiniya eBIC kuti vashanyire mutevedzeri wegurukota uye director weMinistry yeMinistry yeZvekurima uye Kudiridza. Mativi maviri aya akakurukura kuti awedzere kusimbisa kubatana mumunda wezviwanikwa zvemvura. Mainjiniya edu akaunza nyowani hydraulic tekinoroji ...